MATA dia maniry ny hanafoanan'ny IATA ny saram-pahafahana
Home » etn » MATA dia maniry ny hanafoanan'ny IATA ny saram-pahafahana
Aprily 17, 2020
The Malaysia Association Tour Agency (MATA) manentana ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) handao ny sarany rehetra amin'ny mpikambana MATA. Hatramin'ny nanambaran'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) fa areti-mandringana ny COVID-19, dia napetraka ny fameperana ny dia manerana an'izao tontolo izao.
Nofoanana ny fisehoan-javatra lehibe ary mijanona ny orinasa an'arivony.
2.0 Ny fiatraikany ara-bola ho an'ireo mpikambana ao aminay avy amin'ny COVID-19 dia azo avela amin'ny alàlan'ny fanilihana ireto manaraka ireto:
2.1. IATA hanafoana ny sarany 2021 ho mpikambana
2.2. IATA hanafoana ny sarany isam-bolana 2020 (Janoary - Desambra 2020)
2.3 Hanitatra ny fandefasana kaonty voamarina hatramin'ny Desambra 2019
Ity hetsika ity dia hanampy ireo mpikambana ao amintsika izay nanohana mafy ny IATA tamin'ny taona lasa. Koa satria naminavina ny IATA fa ho 50% ny orinasam-pitaterana an'habakabaka rehetra dia hanjavona amin'ity taona ity manerana an'izao tontolo izao, mino izahay fa ny IATA dia afaka manao zavatra hanampiana ireo mpikambana ao amin'ny fanidiana varavarana. Satria toe-javatra miavaka ity dia antenainay fa ny IATA dia handray fepetra miavaka ihany koa handao ny sarany etsy ambony.
Manentana ny MATA fa izao no fotoana tokony hiarahan'ny mpiray antoka rehetra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany hiaro ny indostria, satria miaina ny krizy lehibe indrindra eo amin'ny tantaran'ny fizahantany isika izao. Raha tsy mahomby izany dia mety hahavery orinasa bebe kokoa ny IATA satria manoro hevitra ireo mpikambana izahay mba tsy hanavao ny maha-mpikambana ny IATA.
Azerbaijan dia mahita ampahany tsara amin'ny COVID-19 ihany koa
Mandresy amin'ny ady amin'ny Coronavirus i Hawaii?
Ny vehivavy Thailandey dia maty ora maro taorian'ny vaksinin'ny COVID-19
Ketone Bodies Semaglutide Hevitra momba ny fihenam-bidy: vidiny, fankatoavana an'ny FDA ary aiza no hividianana?
Nofoanan'ny Holland America Line ny fitsangantsanganana an-tsambo fahavaratra Nieuw Statendam sy Volendam
Orinasa misahana ny fampandrosoana ny Ranomasina Mena: hanangana tetezana mankany Shurayrah, ivon-toeram-pizahantany, i ARCHIRODON
WestJet: Sidina bebe kokoa avy any Kanada mankany Hawaii amin'ity ririnina ity
IMEX dia mandefa resaka iraisana amin'ny endrika vaovao
Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha:
Ny fitifirana faobe dia namela olona 13 farafaharatsiny naratra tany Austin, Texas
Vaovao momba ny dia an-tserasera
Mila fanamafisana ny dia ataon'ny orinasa eo am-pikatsoan'ny dia 63%
Manamarika ny andro eran-tany ho an'ny ranomasina ny Sandals Resorts International
Toerana fitsangatsanganana 10 be mpitia indrindra any TikTok